फागुन १३, काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडले निष्कासन गर्न लागेको दोस्रो चरणको हकप्रदका लागि विद्युत नियमन आयोगले पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेको छ । कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिनुपूर्व फागुन २ गते नै विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएको जानकारी दिएको हो ।
जलविद्युत कम्पनीहरुले सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दिँदा अनिवार्य विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार अपि पावरले विद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति लिई फागुन ९ गते हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन दर्ता गराएको हो ।
अपिले दोस्रो चरणमा २९ दशमलव ३८ प्रतिशतको अनुपातमा ५६ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गर्ने भएको हो । हकप्रद शेयर विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ ।
कम्पनीले यस अघि पनि गत कात्तिक १४ देखि मंसिर ४ गतेसम्म १ बराबर शून्य दशमलव ४७ को अनुपातमा हकप्रद शेयर विक्री गरेको थियो । उक्त हकप्रद शेयर पश्चात रू. १ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख ५६ हजार चुक्तापूँजी कायम गरेको छ । सोही पूँजीको आधारमा अपिले हकप्रद शेयर विक्री गर्न लागेको हो ।
यस वर्ष अपि पावरले ९ प्रतिशत बोनस शेयर समेत वितरण गरेको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा विक्री गर्न लागेको २९ दशमलव ३८ प्रतिशत हकप्रद शेयर पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. २ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ५६ हजार पुग्नेछ ।
कम्पनीले ४० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि थप पूँजी जुटाउन हकप्रदको सहारा लिएको हो । उक्त आयोजनाको अनुमानित लागत रू. ७ अर्ब ४० करोडमध्ये रू. २ अर्ब २२ करोड शेयरधनीहरुबाट संकलन गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ ।